भक्तपुरका गेष्ट हाउसमा प्रहरीकाे छापा ! - नेपालबहस
भक्तपुरका गेष्ट हाउसमा प्रहरीकाे छापा !
| १०:५७:११ मा प्रकाशित
२५ असोज, काठमाडौं । भक्तपुरको ठिमी क्षेत्रका तीन गेष्ट हाउसमा प्रहरीले छापा मारेको छ। महानगरीय वृत्त ठिमीले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने गेष्टहाउसहरूमा लकडाउन खुलेपछि असामाजिक क्रियाकलापहरू बढेको भन्ने सुचना पाएको थियो।
गाेप्य सूचनाका आधारमा शनिबार वृत्तबाट खटिएको टोलीले तीन वटा गेष्ट हाउसमा छापा मारेको हो। प्रहरीले ती गेष्ट हाउसबाट तीन सञ्चालकलाई पनि पक्राउ गरेको वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले जानकारी दिए। साथै सात जना महिलाहरूलाई पनि पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीले सुनकोशी गेष्ट हाउस, सनराईज गेष्ट हाउस र बालकुमारी गेष्ट हाउसमा छापा मारेको हो। उनीहरूमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
बैंक एटिएम तोडफोड गर्न खोज्ने व्यक्ति लागू औषधसहित पक्राउ ६ घण्टा पहिले
फरार पाँच प्रतिवादी पक्राउ, कारवाहीका लागि अदालतमा पेश ९ घण्टा पहिले
होम आइसोलेशनमा बसेका ६ को मृत्यु ५९ मिनेट पहिले
पोखराका ६० सहित गण्डकी प्रदेशमा ९८ जनामा संक्रमण पुष्टि ८ घण्टा पहिले
पाँच शैय्याको अस्थायी कोभिड अस्पताल २१ घण्टा पहिले
बाँदरलाई हानेको गोली लागेर एकको मृत्यु ४ दिन पहिले
लोकपप गायक सुनिल गिरीको दशैँ कोशेली ‘मसला’मा सुधिर, जेबिका र बुद्धिको रोमान्स ७ दिन पहिले
बुटवलको कोरोना अस्पतालमा थप दुई जनाको मृत्यु ३ दिन पहिले
सर्लाही घर जल्दा १५ लाखको बराबरको क्षति १ दिन पहिले
फूलपाती लैजाँदै सशस्त्र प्रहरी ७ दिन पहिले
गायक सुमन राईको नयाँ गीत बुट्टे चोली सार्वजनिक २ हप्ता पहिले
सैनिक मञ्चमा नवरात्रिका धुन बजाउँदै सेना ७ दिन पहिले
मेगा बैंक निक्षेप संकलनमा सुस्त, खराब कर्जा बढ्यो ! हेरौं कम्पनी विश्लेषण ११ महिना पहिले
भारतमा कोरोना सङ्क्रमित प्रहरीको सङ्ख्या एक हजार नाघ्यो ६ महिना पहिले
कोरोना बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स चालकलाई थप प्रोत्साहन भत्ता १ हप्ता पहिले